Sɛnea Bible Kyerɛ No, Hwan Ne Dɛe Ɔtia Kristo Anaa Antikristo No?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Maya Myanmar Nahuatl (Central) Ndebele Ndonga Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Umbundu Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Nnansa yi wɔyɛɛ sini bi a ɛyɛ hu paa, na wɔtoo din sɛ Antikristo anaa Deɛ Ɔtia Kristo No.
Nnwontofo kuo bi a wɔagye din bɔɔ dwom bi, na wɔtoo din Antichrist Superstar.
Friedrich Nietzsche, onyansapɛfo a ɔtenaa ase bɛyɛ mfe 160 ni no too ne nwoma baako bi din Antikristo.
Ahemfo ne ahempɔn a wɔtenaa ase wɔ Yesu awo akyi afe 500 bɛsi afe 1,500 mu hɔ no frɛɛ wɔn a wɔsɔre tia wɔn no antikristo.
Martin Luther a ɔfiri Germany a ɔde ɔsom mu nsakrae kɛse bae no frɛɛ Roma Katolek popenom antikristo.
ƐFIRI tete na wɔde asɛm “deɛ ɔtia Kristo” anaa antikristo adi dwuma. Wɔde saa din yi ato ahempɔn ne sini ahorow, enti yɛbisa sɛ: Hwan ne antikristo no? Saa asɛm yi fa yɛn ho nnɛ anaa? Sɛ yɛbɛtumi anya nsɛmmisa yi ho mmuaeɛ a, gye sɛ yɛkɔ Bible no mu kɔhwehwɛ nea antikristo anaa “deɛ ɔtia Kristo” no kyerɛ, efisɛ saa asɛm no pue mpɛn nnum wom.
WƆAHU DEƐ ƆTIA KRISTO NO
Ɔsomafo Yohane nko ara ne Bible kyerɛwfo a ɔde asɛm “deɛ ɔtia Kristo” anaa antikristo no dii dwuma. Ɔkyerɛkyerɛɛ mu sɛn? Hyɛ nsɛm a ɛfiri ne krataa a ɔdii kan kyerɛwee no mu nsow. Ɔkaa sɛ: “Mmɔfra nkumaa, dɔn a ɛdi akyire nie, na sɛdeɛ moate sɛ deɛ ɔtia Kristo reba no, saa na seesei mpo wɔn a wɔtia Kristo bebree aba; na yei na ɛma yɛhunu sɛ dɔn a ɛdi akyire no nie. Wɔfiri yɛn mu na ɛkɔeɛ, nanso na wɔnka yɛn ho . . . Sɛ ɛnyɛ deɛ ɔpo Yesu sɛ ɔno ne Kristo no a, hwan bio na ɔyɛ ɔtorofoɔ? Oyi na ɔtia Kristo no, deɛ ɔpo Agya no ne Ɔba no.”—1 Yohane 2:18, 19, 22.
Yohane bɛtee ase sɛ nea ɔtia Kristo no gyina hɔ ma wɔn a wɔhyɛ da trɛw nyamesom mu atosɛm fa Yesu Kristo ne ne nkyerɛkyerɛ ho mu
Dɛn na saa asɛm yi ma yɛhu? Yohane kaa “wɔn a wɔtia Kristo bebree” ho asɛm. Wei kyerɛ sɛ, “deɛ ɔtia Kristo no” nyɛ onipa baako, mmom nnipa pii na wɔbom yɛ nea ɔtia Kristo no. Nnipa anaasɛ ahyehyɛde a wɔbom yɛ nea ɔtia Kristo no trɛw atosɛm mu, na wɔnnye nni sɛ Yesu ne Kristo no anaa Mesia no. Wɔbɔ mmɔden sɛ wɔremma yɛnhu nsonsonoe a ɛda Onyankopɔn ne Ne Ba Yesu Kristo ntam. Saa nkurɔfo yi ka sɛ wɔne Kristo anaa n’ananmusifo, nanso esiane sɛ “wɔfiri yɛn mu na ɛkɔeɛ” nti, wɔawae afi nokware nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ Bible mu no ho. Bio nso, na saa kuo yi wɔ hɔ bere a na Yohane rekyerɛw ne krataa yi wɔ “dɔn a ɛdi akyire no”; ebia asomafo no wuo akyi.
Dɛn bio na Yohane ka faa wɔn a wɔtia Kristo no ho? Ɔreka atoro adiyifo no ho asɛm no, ɔkaa sɛ: “Honhom mu nsɛm biara a ɛpae mu ka sɛ Yesu Kristo baa honam mu no firi Onyankopɔn, na honhom mu nsɛm biara a ɛmpae mu nka Yesu ho asɛm no mfiri Onyankopɔn. Afei nso, yei ne honhom mu nsɛm a ɛfiri deɛ ɔtia Kristo no a moate sɛ ɛreba, na seesei anya aba wiase no.” (1 Yohane 4:2, 3) Afei wɔ Yohane krataa a ɛtɔ so mmienu no mu no, ɔsii so dua sɛ: “Nnaadaafoɔ bebree aba wiase, nnipa a wɔmpae mu nka sɛ Yesu Kristo aba ɔhonam mu. Yei ne ɔdaadaafoɔ no ne deɛ ɔtia Kristo no.” (2 Yohane 7) Enti Yohane bɛtee ase sɛ nea ɔtia Kristo no gyina hɔ ma wɔn a wɔhyɛ da trɛw nyamesom mu atosɛm fa Yesu Kristo ne ne nkyerɛkyerɛ ho mu.
“ATORO ADIYIFOƆ” NE “ONIPA A ƆNNI MMARA SOƆ NO”
Yesu bɔɔ kɔkɔ sɛ atorɔ adiyifoɔ a wɔte sɛ ‘mpataku adufudepɛfoɔ a wɔhyehyɛ nnwan nwoma’ bɛba
Bere tenten ansa na Yohane rekyerɛw nyamesom mu nnaadaafo ho asɛm no, na Yesu Kristo de afotu ama n’akyidifo sɛ: “Monhwɛ yie atorɔ adiyifoɔ ho, na wɔhyehyɛ nnwan nwoma ba mo nkyɛn, nanso wɔn mu deɛ wɔyɛ mpataku adufudepɛfoɔ.” (Mateo 7:15) Saa ara nso na ɔsomafo Paulo bɔɔ Kristofo a wɔwɔ Tesalonika no kɔkɔ sɛ: “Mommma obiara nnnaadaa mo kwan biara so, ɛfiri sɛ [Yehowa da no remma] gye sɛ ɔwaeɛ no ba ansa, na wɔyi onipa a ɔnni mmara soɔ no adi, ɔsɛeɛ ba no.”—2 Tesalonikafoɔ 2:3.
Enti, wɔ asomafo no bere so no, na atoro adiyifo ne awaefo wɔ hɔ, na na wɔrebɔ mmɔden sɛ wɔbɛsɛe Kristofo asafo no. Obiara a ɔtrɛw nyamesom mu atosɛm ne nnaadaasɛm fa Yesu Kristo ne ne nkyerɛkyerɛ ho mu no ka wɔn a Yohane frɛɛ wɔn “deɛ ɔtia Kristo” no ho. Paulo kaa wɔn ho asɛm sɛ “ɔsɛeɛ ba no,” na wei ma yɛhu adwene a Yehowa wɔ wɔ wɔn ho.
HWƐ YIE WƆ WƆN A ƐNNƐ WƆTIA KRISTO NO NNWUMA HO
Ɛnnɛ nso ɛ? Nnipa ne ahyehyɛde ahorow a wɔbom yɛ nea ɔtia Kristo no da so ara sɔre tia Kristo ne ne nkyerɛkyerɛ. Wɔhyɛ da trɛw atosɛm ne nnaadaasɛm mu sɛnea ɛbɛyɛ a nkurɔfo nhu nsonsonoe a ɛda Agya a ɔne Yehowa Nyankopɔn, ne Ne Ba Yesu Kristo no ntam. Yɛwɔ nea enti a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yie wɔ nyamesom mu nnaadaasɛm a ɛte saa ho. Momma yɛnhwɛ nhwɛso mmienu.
Mfehaha pii ni na asɔre ahorow no atrɛw Baasakoro nkyerɛkyerɛ mu. Wɔkyerɛ sɛ Agya no ne Ɔba no yɛ pɛ. Ɛno nti, nea ɔtia Kristo no ma nkurɔfo adwene tu fra; wɔmma wɔnhu onii ko a Yehowa Nyankopɔn ne Yesu Kristo yɛ ankasa, na wɔka sɛ ɛyɛ ahintasɛm. Saa ahintasɛm yi mma nnipa komapafo pii kwan mma wɔnsuasua Yesu Kristo na kampɛsɛ wɔabɛn Onyankopɔn sɛnea Bible hyɛ wɔn nkuran sɛ wɔnyɛ no.—1 Korintofoɔ 11:1; Yakobo 4:8.
Asɔre ahorow no san ma nkurɔfo adwene tu fra efisɛ wɔhyɛ wɔn nkuran ma wɔde Bible nkyerɛase a wɔayi Onyankopɔn din, Yehowa afiri mu no di dwuma. Ɛmfa ho sɛ edin Yehowa no pue bɛyɛ mpɛn 7,000 wɔ tete Bible nkyerɛase no mu no, wɔayi edin no afiri mu. Dɛn na wei akɔfa aba? Ama onii ko a nokware Nyankopɔn no yɛ no abɛyɛ ahintasɛm kɛse.
Nanso, Onyankopɔn din Yehowa a nnipa komapafo ahu no aboa wɔn ama wɔabɛn Onyankopɔn yie. Richard da so kae bere a Yehowa Adansefo mmienu bi ne no bɔɔ nkɔmmɔ no. Ɔkaa sɛ: “Wɔfiri Bible no mu kyerɛɛ me sɛ nokware Nyankopɔn no din de Yehowa. Bere a mehuu sɛ Onyankopɔn wɔ din no, m’ani gyei yie efisɛ na mentee biribi saa da.” Ɛfiri saa bere no, Richard yɛɛ nsakrae wɔ n’asetenam de Bible mu afotu bɔɔ ne bra sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛsɔ Yehowa ani. Afei ɔde kaa ho sɛ: “Onyankopɔn din a mehunuiɛ no boaa me ma mebɛnee no kɛse.”
Nea ɔtia Kristo anaa antikristo no aka nnipa mpempem pii ahyɛ honhom fam sum mu mfe pii. Nanso sɛ yɛsua Onyankopɔn Asɛm Bible no a, ɛbɛtumi aboa yɛn ma yɛahu nea ɔyɛ antikristo no ankasa na yɛatwe yɛn ho afiri ne nyamesom mu atosɛm ne ne nnaadaasɛm ho.—Yohane 17:17.
Mmuae a Bible de ma no, sɛ wuhu a, ɛbɛyɛ wo nwonwa. Kenkan na hu nea enti a ɛho hia ne sɛnea ɛbɛboa wo daakye.
Asɔre pii kyerɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn yɛ Nyame Baasakoro. Saa na Bible kyerɛkyerɛ anaa?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN June 2015 | Nyansahu Abɛsi Bible Ananmu Anaa?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN June 2015 | Nyansahu Abɛsi Bible Ananmu Anaa?